mpilalaon’ny Tia Kitra sy ny Club M. Samy mbola mandray anjara amin’ny fifaninanana Pro-League Malagasy 2019/2020 avokoa ireo ekipa 3 voatonona ireo ary ho fanomanana indrindra ny dingana faharoa amin’izany fifaninanana avo lentan’ny baolina kitra Malagasy izany no antony nikarakaran’ny ligin’Atsinanana sy ny ekipan’ny Cosfa Analamanga an’ity lalaom-pirahalahiana ity. Samy afa-po, araka ny vaovao voaray avy any Toamasina ny roa tonta, satria afaka hampakarana ny lentan’ireo mpilalao tsirairay avy tokoa raha ity lalao notanterahina omaly ity. Ho henjana, araka izany, ny fiatrehana ny dingana faha-2 amin’ity Pro-League Malagasy ity hanomboka amin’ny volana febroary ho avy eo satria dia izao hita efa miomana fatratra izao daholo ny ekipa mpifaninana rehetra. Ny Cosfa Analamanga moa dia miomana fatratra hitazana ny laharana voalohany vonjimaika eo am-pelatanany eo amin’ity Pro-League ity ankehitriny. Marihina fa tamin’ny lalao tany Barikadimy Toamasina omaly ny ekipa voafantin’Atsinanana no nampiditra ny baolina voalohany izay nosahalain’ny Cosfa 1-1. Ny Cosfa kosa indray anefa no nitarika 2-1 avy eo vao io nosahalain’ny ekipa voafantin’Atsinanana 2-2 io.